ပုံအဖြစ်မျှဝေခြင်း - သင်၏စာသားကိုအထူးပြု၊ Martech Zone
ပုံအနေဖြင့်မျှဝေခြင်း - သင်၏စာသားကို Highlight, နှိပ်ပါ၊ မျှဝေပါ
သောကြာနေ့, ဧပြီ 19, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါလုပ်ဖို့တယ် စာအုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှင့် ဗက် Hayden လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ္ဘာ့ဖလားမှာစာရေးဆရာ Pinfluence - Pinterest နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုစျေးကွက်တင်ရန်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ.
ဗက်သည်သူမ၏စာအုပ်တွင်ရိုးရှင်းသော်လည်းအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရာများကိုဝေမျှသည် ပုံအဖြစ်မျှဝေပါ။ နှစ်အနည်းငယ်အလိုတွင် Bookmarklet ကိုသင်၏ဘရောက်ဇာ toolbar ထဲသို့ဆွဲယူပြီးမည်သည့်ကိုးကားချက်ကိုမျှဝေရန်ပုံသို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နည်းပါးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လွယ်ကူစွာကျဆင်းသွားသည်။ သို့သော်လှည့်ကွက်ဖြစ်သည်!
ငါဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုးကားယူ။ ၎င်းသည် post ကို၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထင်ရှားပြစေသောအခါ, ကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်အားပုံရိပ်ရှာဖွေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာစာသားများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံကိုပေးရုံသာမကဘဲဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ပါသောစာသားအကြားထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပိုမိုအားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ခံပုံတစ်ခုထည့်ပြီး output ကိုအများကြီးပိုပြီးစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ Beth လည်းစာရင်းပြုစုထားတယ်။ PicMonkey စာသားနဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလို။
Tags: beth haydenpicmonkeyအထွေထွေပုံအဖြစ်မျှဝေပါ
လူမှုရေး Buzz ကလပ်: မျှဝေပါနှင့်မျှဝေပါ
Smartfile: သင်၏ကြီးမားသောဖိုင်ဖြေရှင်းချက် Whitelabel